Sahara Desert: Natural Mashura uye Anoshamisa Anoshamisa Hieroglyphs | Absolut Kufamba
Iyo Sahara Desert inzvimbo yakakura kwazvo yenyika iyo inotambanuka kubva ku Gungwa Dzvuku kusvikira Atlantic Ocean, inotora angangoita mapfumbamwe nehafu emamirimita emakiromita. Inovhara huwandu hwe nyika gumi pakati peavo vari Ijipiti, Libya, Chad, Algeria, Morocco, Tunisia neMauritania.
Nekuwedzera ikoko, hazvifanirwe kuuya sekushamisika kuti ndizvo gwenga rinopisa rakakura kwazvo pasi rose uye kuti inopindirana akasiyana ecoregion, imwe neimwe ine zvayakanakira. Nekudaro, ivo havana chekuita nazvo steppe uye savanna ine huni yekumaodzanyemba kweSahara with the xerophilous gomo reTibesti massif. Uye saizvozvowo kana maviri ekare apfuura ne Tanezrouft, imwe yenzvimbo dzakanyanyisa pasi pano. Naizvozvo, kana iwe uchida kuziva zvishoma pamusoro penzvimbo huru yeSahara, tinokukoka kuti ubatane nesu parwendo rwedu.
1 Chii chekuona nekuita mu Sahara renje
1.1 Bani reEnedi
1.2 Iyo Ahaggar massif
1.3 Mupata weMzab
1.4 Nouadhibou, guva remakungwa murenje reSahara
1.6 Erg Chebbi, gungwa remakomo
1.8 Iyo Fezzan, chikamu cheRibya chegwenga reSahara
1.9 Gomo reUniinat, risinganzwisisike hieroglyphs
2 Ndezvipi zvirinani kuenda kugwenga reSahara
3 Ungasvika sei kuSahara
Chii chekuona nekuita mu Sahara renje
Kune nzvimbo zhinji dzegwenga reSahara dzatisiri kana kumbotaura newe nezvadzo. Icho chikonzero chiri nyore kwazvo: idzo nzvimbo saka inhospital kuti ivo chete vechokwadi nyanzvi nyanzvi vanoziva kwazvo kwazvo zvakavanzika zveaya nyika vanoenda kwavari. Nekudaro, kune mamwe masaiti atinogona kushanyira mairi zvakarongwa mafambiro uye kuti vachatipenyesa nerunako rwavo. Tiri kuenda kunoziva mamwe acho.
Iyi inoshamisa nzvimbo iri kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwe Chadhi uye inoonekwa seimwe yenzvimbo dziri kure kwazvo papasi redu. Yakakomberedzwa nejecha pamativi ese, inomira pachena kune magedhi ayo anoyevedza nemapani.
Nhaka Yenyika, zvisikwa zvakaumbwa muEnedi hukuru hukuru nembiru. Pakati pekutanga anomira kunze kweiyo aloba, inosvika 120 metres pakureba uye 77 muhupamhi. Uye zvakaenzana kuziva ndizvo Maburi mashanu, iyo, sekuratidzwa kwezita rayo, inoumba mhando yeatari yekukunda ine mashanu akavhurwa, uye iyo Nzou Arch, Iyo yakafanana nehunde yepachyderm uye kunyangwe ziso muchikamu chayo chepamusoro.
Senge kuti zvese izvi zvaive zvisina kukwana, munzvimbo ino isingafadzi ivo vawana mifananidzo izvo zvinoratidza kuti yaigarwa panguva ye Holocene (yechina yemireniyamu BC). Kunyanya mukurumbira ndevaya vari munzvimbo ye Niola doa, inomiririra vakadzi kusvika pamamita maviri pakureba.
Iyo Ahaggar massif
Isu tava kuenda kumaodzanyemba kwe Algeria kushanyira imwe yenzvimbo dzinoyevedza muSahara. Icho chikomo chemakomo cheAhaggar kana kumba. Zvisinei nekukwirira kwayo, mamiriro ekunze munzvimbo ino haana kunyanyisa kupfuura mune dzimwe nzvimbo mugwenga, ndosaka ichishanyirwa nevashanyi vazhinji.
Nekufamba kwenguva, kukukurwa kwemvura kwakapa makomo aya maumbirwo asingagone kupa iyo nzvimbo a kusanzwisisika kuoneka. Kana kune izvi zvese tinowedzera kuti inyika ye imuhagh, rimwe remataundi Tuareg vanogara muSahara, tichapedzisa kuputira nzvimbo ino nemashiripiti.
Guta rakakosha kwazvo munzvimbo ino, kubva kwaro kushanya kwekushanya kuri Tanamrasset. Kana iwe uchida kuziva guta rakavakirwa kutenderedza oasis chaiyo, uku ndiko kwaunoenda. Uye zvakare, ine diki musamuyemu prehistory uye imwe ye geology. Asi inonyanya kuzivikanwa nekuti French yakavambwa mairi charles de foucauld, mutsvaki uye asinganzwisisike wekufona "Kunamata kwemugwenga".
Hatina kusiya Algeria tichinosangana nechimwe chezvishamiso zveSahara: mupata weMzab, wakazivisa Nhaka Yenyika. Iri ibwe rine matombo rakayambuka nemupata unogara rwizi rwezita rimwe chete.
Inogarwa ne vasikana, dzinza revaBerber iro rakagoverwa nemadhorobha madiki ane masvingo, rimwe nerimwe rakavakwa pane chimwe chezvikomo munzvimbo iyi. Pakati penzvimbo idzi pane Beni Isguen, ane musikiti kubva muzana ramakore regumi nemaviri; Melika, Bounoura o Iyo Ateuf. Asi chakanyanya kukosha ndechekuti Ghardaia, izita rinopihwawo kune iyo yakaoma yose, ine migwagwa yakatetepa uye dzimba dzayo diki dzeadobe.
Nouadhibou, guva remakungwa murenje reSahara
Kunyangwe isina kunyanya kukwezva, tinounza dhorobha reNouadhibou kumitsara iyi nekuti imusha kumakuva ese echikepe, chimwe chinhu chinoshamisa musango. Zvisinei, iri pamhenderekedzo yeAtlantic Ocean ye Mauritaniya, panosangana Sahara negungwa.
Yanyura mune rakakura dambudziko rehupfumi, Hurumende yenyika yakabvumidza ngarava kubva kumativi ese epasi kuti dzisiirwe pamahombekombe ayo. Mhedzisiro yacho ndeyekuti ipapo iwe unogona kuona angangoita mazana matatu anga achidzikisira nekufamba kwenguva uye kugadzira a nzvimbo yechipoko chaiyo.
Este ksar o guta rakavakirirwa Moroccan yakave yakakurumbira pasirese pasireti yemhando dzakasiyana dzemavara ayo zuva rinoratidzira padzimba dzayo dzeadobe. Iwe uchachiwana iwo mashoma maawa 'dhiraivha kubva Marrakech munzira yakare inogadzirwa nemakaravhani engamera.
Uku ndiko kunaka kwaAit Ben Haddou kuti zvaziviswa Nhaka Yenyika uye yakashanda seyakagadzirirwa vazhinji mafirimu sa 'Lawrence weArabia', 'Iyo Jewel yeNile' kana 'Alexander Mukuru' uye kubva kuterevhizheni akateedzana sa 'Game of Thrones'.
Erg Chebbi, gungwa remakomo
Zvakare iri mu Morocco, iri gungwa rematope rinotora dzinosvika zana negumi mativi emakiromita uye zvakare rinoshamisira. Chimwe chezvinhu zvinonyanya kufarirwa munzvimbo iyi kutasva ngamera uye kurara mumatende echokwadi.
Iyi migwagwa inobva kuguta re Merzouga, iyo saka yakashandurwa zvakakwana kutashanyi nemahotera akati wandei. Mariri iwe unogona zvakare kuona iyo Merzouga Rally, inova chikamu chedunhu reDakar Series. Uye kunyange ine imwechete leyenda maererano nemirwi yayo. Inoti ivo vakazvarwa nehasha dzaMwari apo vagari veMerzouga vakaramba kubatsira amai nevana vavo. Humwari hwakazomutsa dutu rinotyisa rejecha rakavagadzira. Vagari venzvimbo nanhasi vanotenda kuti vanonzwa kuchema kunouya kubva kumatunduru iwayo.
Pasina kusiya Morocco, kumwe kushanya kumusuwo chaiwo weSahara ndiko Ouarzazate kana Uarzazat, sekuzivikanwa kwayo «Gedhi Remurenje». Iyo iri pazasi peiyo atlas makomo uye pedyo neiya inonzi Maodzanyemba Oasis.
Chaizvo Atlas inonzi iyo firimu zvidzidzo Chii chiripo muguta. Kana isu takambotaura newe nezveAit Ben Haddou segadziriro yemafirimu akasiyana, izvi zvainyanya kukonzerwa nekuvapo kwemaseti aya, ayo anogara dzinosvika mahekita makumi maviri uye akaita Urzazat firimu guta guru reMorocco.
Kashba yeTairtirt muOuarzazate
Asi guta rine zvakawanda zvekupa iwe. Kune kutanga, ayo anoshamisa uye akanyatsochengetedzwa nhare yeTaourit. Ndiyo kashbah kana nhare yeBerber mavambo ari pamoyo weguta uye kuti, panguva yayo, kwaigara Pasha weMarrakech. Izvo zvave zvichiwanzo fananidzwa nehombe jecha castle pamhenderekedzo. Uye iwo mufananidzo chaiwo nekuti iwo madziro eadobe uye shongwe dzayo huru pakati pehukuru hwegwenga vanozvipa izvo chimiro.
Iyo Fezzan, chikamu cheRibya chegwenga reSahara
Iyo Fezzan nharaunda ingangove iri chikamu chinoshamisa kwazvo che Ribya Sahara. Iyo inzvimbo yakakura iyo gwenga rinosanganiswa nemakomo nemipata yakaoma, asi, pamusoro pezvose, panowanikwa nzvimbo yega yega oasis inobvumidza hupenyu kuvanhu vakasikwa vakatenderedza.
Iyi nharaunda yeSahara inokupa nzvimbo dzinoyevedza senge gomo rinoputika re Waw-an-Namus, yehukuru hwayo iyo chokwadi chekuti inogara oasis uye matatu emadhamu ekugadzira anokupa iwe zano. Zvakare gungwa rejecha re Murzuq, ine mirwi yayo mikuru; izvo zvakasarudzika Makomo Akakus, nemaumbirwo avo echinyakare, kana miti yemichindwe netsanga zviri kumucheto kwegungwa rine munyu re Umm-al-Maa, chisaririra chekare megafezzan nyanza iyo yakanga yakakura seEngland.
Kune rimwe divi, iro rinonyanya kukosha guta iri Sabha, iro guta rezororo revanhu zviuru zana pakakurira Muhamad el Gaddafi, aimbova mutungamiri weLibya. Asi kune zvimwe zvidiki zvakafanana Ghat, Murzuq o gadhamis.
Gomo reUniinat, risinganzwisisike hieroglyphs
Uweinat massif inoparadzirwa pakati Ijipiti, Libya pachayo neSudan. Yakakomberedzwa negwenga reSahara, asi zvakare ine nzvimbo dzakaorera dzakadai seya Bhahariya o Farafra. Nzvimbo iyi magineti ane simba kune vanofamba vanofarira kunakidzwa.
Musasa kuEl Fezzan
Asi, pamusoro pezvose, zvinomira pachena nekuti mubani re Gilf kebir zvakavezwa zvakawanikwa pamatombo uye hieroglyphs chekare kwazvo chinomiririra mhando dzese dzemhuka. Ivo vakawanikwa neanotsvaga muIjipita Ahmed Hassanein Pasha muna 1923. Uyu akafamba makiromita makumi mana enzvimbo iyoyo, asi akatadza kusvika kusvika kumagumo izvo zvinoita kuti kuve nemamwe.
Chekupedzisira, munzvimbo ino mune inonakidza Kebira crater, iyo yaive mhedzisiro yemhedzisiro yemeteorite yakaitika makore zviuru makumi mashanu apfuura uye inofukidza nzvimbo yakakura zviuru zvina mazana mashanu nemazana mashanu emakiromita.
Ndezvipi zvirinani kuenda kugwenga reSahara
Sezvaunogona kufungidzira, iyo Sahara ine imwe yemamiriro ekunze anotyisa pasi rose. Ichokwadi kuti nzvimbo yakakura kudaro yenyika ine, nekumanikidza, kuratidza mamiriro ekunze akasiyana. Nekudaro, zviripo zvese kusavapo kwemvura uye kupisa kwakanyanya, uko kunogona kusvika nyore makumi mashanu neshanu madigiri Celsius, zvakajairika kune zvese izvi.
Muchokwadi, muchirimo nezhizha, mafambiro kuenda murenje anongoitika pakuvira kwezuva. Naizvozvo, nguva dzakanakisa dzekufamba kuenda kuSahara dziri matsutso nechando, kunyanya mwedzi inoenda kubva munaNovember kusvika Kukadzi.
Uye, pakufamba, iwe unofanirwa kugara uchisarudza iyo zvakarongeka. Iwe haugone kupinda muiyi colossus yejecha usina mutungamiriri anokwanisa nekuti hupenyu hwako hwaizove munjodzi huru.
Nzvimbo yenzvimbo yeSahara
Ungasvika sei kuSahara
Hatigone kukurudzira imwe nzira yekusvika kurenje iri rakakura. Icho chikonzero ndechekuti iwe unogona kusvika pairi kubva kunyika dzakasiyana. Zvisinei, chinhu chakajairika ndechekuti unobhururuka uchienda kuguta riri pedyo uyezve kuhaya, sezvatakataura, vamwe kushanya kwakarongeka.
Semuenzaniso, kana iwe uchida kushanyira Moroccan Sahara, unogona kubhururuka kuenda kumaguta senge Marrakech uye, kana uchinge uriko, tsvaga mafambiro. Nekudaro, kune mamwe masangano akasarudzika ayo anokupa iwe kare iyo yose yekufamba pasuru usati waenda.
Mukupedzisa, gwenga reSahara riri chikuru pasi rose pakati peinodziya. Iyo inovhara nyika dzinoverengeka uye inokupa iwe zvakasarudzika zvishamiso, zviroto maguta pazasi peoases uye zvisinganzwisisike zvinyorwa mumatombo ayo anodzokera kumashure kune mhutsa yenguva. Iwe unotoshinga kuziva iyi colossus yepasi redu?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Sahara renje